Kaadị 66; ụgbọ ibu azụmahịa maka Ecommerce WordPress | ECommerce ozi ọma
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ itinye a WordPress dabeere eCommerce na ebe nrụọrụ weebụ, enwere ọtụtụ azịza ụgbọ ibu azụmahịa ị nwere ike iji. Na nke a, anyị chọrọ ịgwa gị gbasara ya Cart66, ụgbọ ibu azụmahịa maka WordPress Ecommerce, nke na mgbakwunye na ịbụ ngwa mgbakwunye, nwekwara ọrụ akwadoro.
Nke a pụtara na njirimara nke ụlọ ahịa a na-agabiga ihe enwere ike ime na ngwa mgbakwunye. Dịka ọmụmaatụ, Cart66 bụ naanị eCommerce nhọrọ maka WordPress nke ahụ na-eme ka saịtị gị nwee nchedo ma na-ekwenye ekwenye na PCI, ruo n'ókè nke na ịchọghị akwụkwọ SSL.
Akụkụ kasị dị ịrịba ama nke ngwa mgbakwunye a bụ na ọ na-eme na-ewu ulo oru e-commerce mee ka ọ dị mfe. Maka ndị na - ebido ebido, ọ na - enye nkwado maka ịkwụ ụgwọ ihe ntanetị 100 ma na - abịa na usoro ịgba ụgwọ na - emegharị ugboro ugboro. Ọbụghị naanị nke ahụ, ọ na-enye netwọkụ nkesa ọdịnaya maka ngwaahịa dijitalụ yana ọnụ ụzọ ndị ahịa na-enye ha ohere ịnweta akụkọ ntolite na ntukwasi obi.
N'ihi ya Cart66 bụ azịza Ecommerce nke enwere ike itinye n'ọrụ iji ree ngwaahịa dijitalụ dị ka egwu na vidiyo, ịnara onyinye na ntanetị, ibipụta akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa, ire na ibupu ngwaahịa anụ ahụ, ire ndenye aha na ịkwụ ụgwọ ọnwa, wdg.
A ghaghi ikwu ya na ya Cart66, njikwa ngwakọ nwere ike ịme n'ụzọ dị otú a na ị nwere ike ịnweta ntinye nke ngwaahịa ọ bụla iji zere ịghafe ngwaahịa. Ọbụghị naanị nke ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta njikọ "Zụta ugbu a" na mgbe ịpịrị, nye gị ohere itinye otu ma ọ bụ karịa ngwaahịa ndị ahịa na ụgbọ ibu azụmahịa ma debe ha ozugbo na peeji ndenye ọpụpụ. Enwere ike iji njikọ ndị a na akwụkwọ ozi email ma ọ bụ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Kaadị 66; ụgbọ ibu azụmahịa maka Ecommerce WordPress
Volusion, Ecommerce ngwanrọ iji mepụta ụlọ ahịa n'ịntanetị